EMUI 10 ga-ahapụrụ anyị ngwa igwefoto ọhụrụ | Gam akporosis
EMUI 10 megharia ngwa igwefoto Huawei
EMUI 10 ka emere n’ihu izu ole na ole gara aga. Versiondị ọhụrụ nke oyi akwa nhazi Huawei bụ onye ọrụ gọọmentị ma a ga-ahapụ ya n'ime izu abụọ maka ekwentị izizi sitere na onye nrụpụta ya. Ọ na-eme ka anyị nwee ọtụtụ akụkọ anyị nwere ike ịhụ na mmemme ahụ. N'etiti ha, a na-atụ anya mgbanwe na interface ya, nke rutekwara ngwa igwefoto.
Huawei n’onwe ya ekerịtawo vidiyo nke anyị ga-ahụ mgbanwe ndị ga-abịa na ngwa igwefoto ya. Ekele dịrị ha, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ EMUI 10 nyere anyị akụkọ na nke a. Obere mgbanwe na interface na ọrụ ọhụrụ mgbe ị na-eji ya.
EMUI 10 ga-emeziwanye atụmatụ nke ngwa igwefoto. A na-etinye aka na imewe ebe ịdị mfe na-achị, na-eme ka iji igwefoto dị na ekwentị dị mfe n'oge niile. Ihe aesthetics n'ozuzu ha dị ọcha karị, ihe ndị a na-enweta doro anya n'oge niile ma dị mfe. Ya mere ịgagharị na ngwa igwefoto ga-adị mfe, ezigbo maka ndị ọrụ niile.
Anyị nwekwara ike ịhụ otú animations gosiri na gbanwetụrụ ha ga-abụ ihe ọzọ nke akara ngosi njirimara na ngwa ahụ. Nweghachi a dị mkpa na ngwa ahụ. Ha na-achọ nhazi nke ka mma, nke na-agbakwunye nke ọma na akụkụ nkeonwe nke ekwentị.
Ihe nhicha mara mma, mbugharị ma ọ bụ njikwa ikpughere ka a na-ahụ anya na atụmatụ ọhụrụ a ewepụtara na EMUI 10. Ya mere, ọ ga-ekwe omume iji nhọrọ ndị a rụọ ọrụ nke ọma. Ihe bụ ihe ọzọ, ụzọ mkpirisi na-webatara dị ka nzacha ma ọ bụ sliders, nke bụ akụkụ ndị ọzọ dị mkpa n'ime ngwa igwefoto.
EMUI 10 ga-ewepụta ọkwa na Septemba, n'agbanyeghị n'ụdị beta, na ekwentị mbụ nke Huawei. Ka ọnwa na-aga, ọ ga-erute n'ụdị ndị ọzọ na n'ụzọ kwụsiri ike, dịka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro. Anyị ga-elebara nkenye anya nke nhazi akwa gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » EMUI 10 megharia ngwa igwefoto Huawei